HUAWEI nova 5T မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ AI ကင်မရာတွေ အကြောင်း - PX
HUAWEI ကနေပြီးတော့ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ nova 5T ဟာ AI ကင်မရာ ၅ လုံးပါဝင်တာကြောင့် smartphone photography ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေကြားမှာ စိတ်ဝင်စားမှု အများအပြားကို ရရှိနေတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ HUAWEI nova 5T မှာ ပါဝင်တဲ့ AI ကင်မရာတွေ အကြောင်းကို ဝေမျှရှင်းလင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1. လှပကျော့ရှင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယို နဲ့ selfie တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မယ့် AI အထောက်အပံ့ပြု ကင်မရာစနစ်
HUAWEI ဖုန်းတွေဟာ အဆင့်မြင့်မားတဲ့ မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ အင်အားကြီးထုတ်ကုန်တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံနေရပြီး nova series တွေ ဟာဆိုရင်လည်း ၎င်းတို့ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ selfie camera တွေကြောင့်ကျော်ကြားလျှက်ရှိပါတယ်။ HUAWEI nova 5T မှာ 32MP ultra-clarity camera ပါဝင်တာကြောင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုကင်းမဲ့ပြီး တိကျတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးစေနိုင်ပြီး ဆံချည်တစ်မျှဉ်ချင်းဆီကအစ မြင်တွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ selfie တွေကို ရိုက်ကူးစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ AI HDR+ နည်းပညာကြောင့် အကောင်းမွန်ဆုံးသော ရိုက်ကူးမှုတွေ ရရှိအောင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
2. မည်သည့် အနေအထားမှာမဆို အကောင်းမွန်ဆုံး ရိုက်ကူးနိုင်မယ့် အင်အားကြီးမားသည့် Quad-Camera
AI ကင်မရာ ၄ လုံး တပ်ဆင်ထားပြီး high-definition ၊ ultra-wide angle ၊ macro နှင့် depth of filed ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းများ ထောက်ပံ့ထားသည့် HUAWEI nova 5T သည် အရောင်ကြွယ်ဝပြီး ပြတ်သားသည့် ပုံရိပ်များအား မည်သည့် အနေအထားတွင်မဆို ရိုက်ကူးစေနိုင်ကာ ကျယ်ပြန့်သည့် သဘာဝရှုခင်းများလည်း အနီးကပ် ရိုက်ကူးစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
HUAWEI nova 5T မှာ AI အားဖြည့်ထားတဲ့ semantic segmentation နဲ့ partition optimization နည်းပညာ ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် 48MP HD Lens ၊ 16MP wide-angle lens ၊ 2MP macro lens နဲ့ 2MP bokeh lens တွေပါဝင်တဲ့အတွက် ပုံရိပ်တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ တိကျပြတ်သားမှု ကို ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ မည်သည့်အလင်းအနေအထားမှာမဆို exposure အား ထိန်းညှိပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ HUAWEI nova 5T ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဓာတ်ပုံပညာပိုင်းဆိုင်ရာ algorithms တွေကြောင့် အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီး resolution မြင့်မားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဘယ်လို အနေအထားမှာမဆို ရိုက်ကူးစေနိုင်မှာဖြစ်သည်။
3. သဘာဝနှင့် မခြားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးစေနိုင်မယ့် 48 MP HD Imaging
Sony Sensor ကို အသုံးပြုထားပြီး 4-in-1 pixel fusion နည်းပညာပါဝင်လာသည့်အပြင် 48MP resolution နဲ့ 1/2-inch light sensing unit လည်း ပါဝင်တာကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရရှိစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. မက်မောဖွယ်ကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်တွေပေးစွမ်းနိုင်မယ့် Handheld Night Photography
HUAWEI ရဲ့ ဦးဆောင်လမ်းပြနေတဲ့ Handheld Super Night Mode ဟာ ညဖက်အချိန်တွေမှာ စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအတွေ့အကြုံကို တစ်ဖန်ဆန်းသစ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ရိုက်ကူးနိုင်တာကလည်း အသိဉာဏ်မြင့်မားတဲ့ light sensing ၊ image denoising နဲ့ အခြားသော အဆင့်မြင့်နည်းပညာများတွေနဲ့အတူ long exposure ၊ multi-frame stabilization နှင့် calibration များကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ HUAWEI nova 5T ဟာ သမာရိုးကျဖုန်းကို လက်နဲ့ပဲကိုင်ပြီး ရိုက်ကူးရင်တောင်မှ tripod အသုံးပြုပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့အလား ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ညဖက် ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် 48MP lens မှာ ပါဝင်တဲ့ ကြီးမားသည့် sensor ၊ အဆင့်မြင့်တင်ထားသည့် Image Signal Process နဲ့ Neural Processing Unit(NPU) hardware ၊ AI Image Stabilization (AIS) နည်းပညာ နဲ့ RAW image mulit-frame synthesis algorithm များကြောင့် ပုံရိပ်တစ်ခုချင်းဆီရဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ၊ ပုံရိပ်အလွှာတွေ နဲ့ အရောင်ချိန်ဆမှုတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် သုံးစွဲသူတွေလည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်တဲ့ ညဖက်ပုံရိပ်တွေကို shutter တစ်ချက်တည်းနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး camera setting ပြုပြင်ခြင်း နဲ့ post editing လုပ်ဆောင်ခြင်းမှလည်း ကင်းဝေးစေနိုင်မှာ ဖြစ်သည်။
5. ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်စေမယ့် Ultra-Wide-Angle Lens
f/2.2 17 mm ultra-wide angle lens ကြောင့် HUAWEI nova 5T ဟာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ မြို့ပြ နဲ့ သဘာဝရှုခင်းတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘောင်အတွင်း တိကျပြတ်သားစွာ ရိုက်ကူးစေနိုင်မှာဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် HUAWEI nova 5T ဟာ သုံးစွဲသူတွေကို 4cm အထိ နီးကပ်တဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးစေနိုင်မှာ ဖြစ်သည်။
Portrait ပုံ တွေ ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်း ဝါးထားသည့် နောက်ခံအား ရရှိနိုင်ရန်အတွက် bokeh lens နဲ့ software algorithms တွေကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချလျှက်ရှိပါတယ်။ Kirin Chipset ရဲ့ ISP real-time processing လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် wide aperture bokeh ဟာ ပိုမိုသဘာဝကျပြီး ချောမွေ့တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
6. တစ်မူထူးခြားတဲ့ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခြင်းအား ပေးစွမ်းနိုင်မည့် ကင်မရာ
HUAWEI nova 5T မှာ Artificial Intelligence (AI) နည်းပညာ ပါဝင်လာပြီး သုံးစွဲသူတွေကို အကောင်းမွန်ဆုံးသော ပုံရိပ်များ သာမက ဗီဒီယိုများကိုပါ ဖုန်းတစ်လုံးတည်းနဲ့ ရိုက်ကူးစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
HUAWEI nova 5T ရဲ့ ကျောဖက်မှာ ပါဝင်တဲ့ AI Quad ကင်မရာ မှာ 1/2 inch 48 MP main sensor နဲ့ 16 MP ultra-wide sensor ပါဝင်ပြီးတော့ အရှေ့ကင်မရာမှာ 32 MP High-Definition Lens ပါဝင်တာကြောင့် အလှပဆုံးသော selfie တွေကို ရိုက်ကူးစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
HUAWEI nova 5T မှာ ပါဝင်တဲ့ AI Image Stabilization ၊ Auto Exposure Lock (AEL) နဲ့ Auto Focus Lock (AFL) နည်းပညာတွေရဲ့ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ပုံရိပ်တွေဟာ တိကျပြီး ပြတ်သားစွာ ထွက်ရှိလာမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် အဆင့်မြင့်မားတဲ့ video-shooting တွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
7. AI Spotlight Reel
အင်အားကြီးမားတဲ့ NPU နဲ့ AI Algorithms တွေကြောင့် HUAWEI nova 5T မှာ automatic video editing လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်လာပြီး ၎င်းမှာ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူများကိုပါ လွယ်ကူစွာ video edit လုပ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ AI ထောက်ပံ့ထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ထပ်တလဲလဲ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အလိုအလျောက် သိရှိစေနိုင်ခြင်းဖြင့် clip တွေကို အခါခါ ပြန်လည်စီစစ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေမှာပါ။
AI သည် ဗီဒီယိုထဲတွင် ပါဝင်သည့် subject များအပေါ်တွင် auto-beautification လုပ်ဆောင်ချက်များ ထည့်သွင်းရန် အထောက်အပံ့ပြုနိုင်စေခြင်း နှင့် ဖိုင်များဝေမျှခြင်းအား ထိတွေ့မှု တစ်ချက်မှာပင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
8. AI Color
HUAWEI nova 5T ရဲ့ Kirin 980 chipset မှာ NPU computing ပါဝင်တာကြောင့် အဆင့်မြင့်မားတဲ့ algorithm ကို ရရှိစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာဟာ ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ ပုံရိပ်တွေရဲ့ အရောင်တွေကို သိမ်းထားနိုင်ပြီး နောက်ခံအရောင်တွေကို အဖြူ၊ အမည်း ပြောင်းစေနိုင်ခြင်းဖြင့် focus ထား ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ ပုံရိပ်ကို ပိုမိုထင်ရှားစေမှာပါ။